❤️ Comment Obtenir des Vues Tik Tok - Tilmaan Wacan - Winches Club
Helitaanka aragtida Tik Tok dhab ahaantii aad bay uga sahlan tahay sidaad u malaynayso, waxaana jira siyaabo badan oo loo sameeyo.. Aynu eegno siyaabaha kala duwan ee loo ururiyo dib u eegista Tik Tok oo aan tilmaamno siyaabaha ugu wanaagsan ee loo kordhin karo dib u eegistaada Tik Tok.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee haddana muuqda ee hal-abuurayaasha qaarkood ay u qaataan si fudud waa dhagaystayaashooda.. Dhagaystayaashaadu waa udub dhexaadka aragtida iyo hawlgelinta aad heli doontid. xisaabtaada. Sidaa darteed waxaa lama huraan ah inaad ugu yaraan baratid dhagaystayaashaada si aad awood ugu yeelatid inaad la qabsato nuxurkaaga iyo agrave; waxa laga filayo & agrave; ka eeg kanaalkaaga Tik Tok. Ma aha inay adkaato inaad ogaato dhagaystayaashaada. Waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn kartid si aad si fiican ugu barato dhagaystayaashaada. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee tan loo sameeyo waa in la sameeyo codbixinta iyo codadka onlaynka ah. Waxay ku siin karaan tilmaame ka fiican tayada. helitaanka waxa ku jira iyo waxa laga yaabo in loo baahan yahay in la beddelo; & agrave; mustaqbalka si looga dhigo nuxur soo jiidasho u leh dhagaystayaal ballaadhan oo caalami ah.
Marka lagu daro sahannada ka qaybqaadashada iyo Q&A ee taageerayaashaada, Falanqaynta Tik Tok waa hab kale oo weyn oo lagu qiimeeyo waxqabadkaaga guud. Qiimaynta waxqabadkaaga guud waa lama huraan, maxaa yeelay haddii aadan yeelin, koontadaadu ma noqon karto mid soo jiidasho leh waxaana laga yaabaa inaysan lahayn dad badan oo la soo xiriiraya mustaqbalka dhow.
Eeg qoraalkan Instagram -ka
Qoraal la wadaago TikTok (@tiktok) daaran Jul 7, 2020 waa 12:00pm PDT
Soo hel Fikradaha Mawduuca Cusub
Waxaa intaa dheer in la barto dhagaystayaashaada, waxaa kale oo muhiim ah in lala yimaado fikrado nuxur cusub. Helitaanka fikradaha nuxurka cusub ayaa ah hab wanaagsan oo looga dhigi karo kanaalkaaga Tik Tok mid aad u xiiso badan iyo, sidaa darteed, si loo dhiirrigeliyo dadka & agrave; booqo. Waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto marka la raadinayo fikradaha nuxurka cusub, waa inaadan mid toos u koobiyeyn. Isku day inaad abuurto waxa ku jira oo ku salaysan isbeddel fayruus ah ama skit, hab iyo agrave; kaliya ha ku darin & agrave; Tirada dadka kale ee soo dhajinaya isku mid guud oo ku saleysan waxa isbedelaya ama fayras ah. Dib -u -warshadaynta ama nuqulidda waxa ku jira waxay keeni kartaa in la mamnuuco ama la xaddido koontadaada illaa xad haddii la go'aamiyo in nuxurkaagu aanu asal ahayn
Markaad tahay raadinaya dhiirigelin fikradaha nuxurka cusub, maxaad uga hadli weyday & agrave; saaxiibadaa ? Asxaabtaadu waxay noqon karaan il weyn oo waxyi ama macluumaad haddii aad raadinayso & agrave; abuuro Tik Tok xiiso leh oo soo jiidasho leh. Dushaas, isku day inaad eegto kanaalada kale ee warbaahinta bulshada. Ka sokow, Falanqaynta warbaahinta kale ee bulshada ayaa ku siin doonta aragti guud oo ku saabsan nooca waxyaabaha laga yaabo inaad rabto inaad abuurto mustaqbalka dhow iyo sida ay tahay in loo daabaco;. Helitaanka fikradaha nuxurka cusub ee dad badan ee Tik Tok ayaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah qaybaha ugu adag ee barnaamijka.. Tani waa sababta oo ah waxaa jira dad aad u badan oo adeegsanaya app -ka taas oo ay adkaan karto in si dhakhso leh loo noqdo mid gaar ah oo asal ah, ugu yaraan ma & agrave; baaxad weyn.
Tik Tok waa madal hal -abuur leh oo caqabad ku ah isticmaaleyaasheeda si ay u abuuraan waxyaabo cusub oo soo jiidasho leh oo faa'iido leh beesha. Haddii aad qorsheyneyso inaad abuurto waxa ku jira, Qoritaankiisa iyo qoritaankiisa waa hab weyn oo lagu badbaadin karo fikradahaaga laguna qoro warqad. Tani waxay ku siinaysaa fursad aad u fiican oo aad ku abuuri karto waxyaabo xiiso leh.
Joog Wargelinta & oacute;
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican, ugu joogto ah oo hufan, si aad fikrado badan uga hesho Tik Tok waa inaad ogaato mashiinkaaga. Waxaa laga yaabaa inay muhiim tahay inaad la socoto wararka ugu dambeeyay iyo cusboonaysiinta. maalin, gaar ahaan haddii isbeddello la taaban karo la sameeyo codsiga ama haddii isbeddelada ay u badan tahay inay saameeyaan koontadaada. Waxaa muhiim ah in la raaco Tik Tok iyo dhammaan khamaarka iyo agrave; maalin uu helay, maxaa yeelay tani waxay kuu dammaanad qaadaa sharadka iyo agrave; maalmaha caadiga ah. Haddii aadan si joogto ah ula socon wararka iyo agrave; maalin iyo sidoo kale abuurayaasha, waxaa laga yaabaa inaad ku aragto is -dhexgal yar xisaabtaada Tik Tok. Tani waxay horseedi kartaa koritaan hoose oo ka mid ah ganaaxyada kale haddii aadan raacin tilmaamaha Tik Tok.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu wargeliyo. oo leh Tik Tok. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud uguna waqtiga badan waa is-qoritaanka iyo agrave; warside. Wargeysku wuxuu ka kooban yahay wax suuqgeyn ah iyo sidoo kale warar iyo casriyeyn. maalin aan badnayn… Ka sokow, Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fiican u fahamto sida Tik Tok u soo jiito dad badan sannad walba. Ka sokow joogteynta dhaqdhaqaaqyada Tik Tok, waxaad kaloo tixgelin kartaa inaad caan ku noqoto Tik Tok. Ka dib oo dhan, xiddigaha warbaahinta bulshada ee Tik Tok ayaa soo bandhigay dakhliga wanaagsan mahad this & agrave; xayaysiis iyo kafaala -qaadka kadib furitaanka koonto ama xisaab ku filan, ama ka dib markii mid ka mid ah fiidyowyadooda uu fayras noqday.
Qoraal la wadaago TikTok (@tiktok) daaran Mar 6, 2020 at 3:00pm PST
Samee Fiidiyowyo Waxbarid oo Gaar ah
Sameynta fiidiyowyo wax barasho oo asal ah aad bay muhiim u tahay. Dhab ahaantii, Fiidiyow xog -ogaal ah ayaa u badan inuu ku bixiyo natiijo xiiso leh oo wax walba kuu sahli doonta. dhammaan. Markaad ka fikirto fiidyowyada gaaraan, & agrave; waqtiga hadda, booqashooyinka wargelinta ah waa wax naadir ah. Tan waxaa lagu go'aamiyaa; xaqiiqda ah in inta badan fiidiyowyada Tik Tok ay ku saleysan yihiin mash-ups fiidiyowga muusikada. Si kastaba ha ahaatee, Tirakoobka arjiga ayaa si isa soo taraya u tilmaamaya in adeegsaduhu yahay koox dadweyne.
Tusaalaha fiidiyaha waxbarashada gaarka ah ee aad soo saari karto waa samaynta sida loo hago ciyaarta fiidiyaha. Tusaale ahaan, waxaad muujin kartaa sifo gaar ah ciyaarta dhowr ilbidhiqsi. Waa hab fiican oo dadku u xiiseeyaan nuxurkaaga iyo waxa baahinaya. kanaalkaaga guud ahaan.
Ugu danbeyn, ku saabsan waxa ku jira Tik Tok, waxaa muhiim ah in la xusuusto in dadku rabaan dhakhso, soo jiidasho leh wax baraya wax ama leh qiime madadaalo. Madadaalada waa hab kale oo weyn oo lagu kobciyo waxyaabaha ku jira Tik Tok -kaaga, inkasta oo uu sidaa yiri, waa inaad ogaataa in fiidiyowyada wargelinta iyo waxyaabaha ku jira ay yihiin hab wanaagsan oo aragtiyo badan looga helo Tik Tok, maxaa yeelay meeshaani waa aag aan runtii la samayn. sahamiyay by Tik Tok kuwa ugu caansan uguna caansan saamaynta.
Ka dhig Fiidiyowyadaada Maadda
Tik Tok waa meesha ay ku dhasheen waxyaabo gaar ah, qosol iyo qiiro leh. Waa muhiim inaad iska dhaafto marmar oo aad ka dhigto qaar ka mid ah fiidiyowyadaada qosol.. Had iyo jeer ma aha lagama maarmaan in la yeesho qorshe taxaddar leh si fiidiyowyadaada loogu qoslo. Isku day inaad ku darto qaar ka mid ah qoraallada xiisaha leh fiidiyowyadaada, iyo waliba muusiga ku habboon. Waxaad kaloo abuuri kartaa mini skit ama skit oo ku jira waxyaabo kala duwan. arrimaha iyo fikradaha. In aad noqoto qof qosol badan ma qaato feker badan. Habka ugu dhaqsaha badan ee loo abuuro fiidiyow qosol leh wuxuu noqon doonaa in la ciyaaro kaftan. saaxiib. Baashaalka yaryar ee Tik Tok ayaa si gaar ah caan u ah. Sida talooyinka kamaradaha iyo farsamooyinka.
Ka hadal Tik Tok & agrave; qaar ka mid ah asxaabtaada. Badanaa, dadku waxay ku kala aragti duwan yihiin noocyada kala duwan ee Tik Tok iyo waxa loo qaadan karo inay run yihiin. sida qosolka leh ee app -ka. Sidaa darteed waa muhiim inaad hadasho hadday suurtogal tahay & agrave; laga bilaabo dad kale oo aad taqaan si aad uga hesho jawaab -celin iyo fikrado ku saabsan qaar ka mid ah waxyaabaha aad soo saarto iyo haddii loo qaadan karo qosol iyo in kale.
Marmar, qaar ka mid ah fiidiyowyadii ugu qosolka badnaa ayaa la abuuray ka bilow fikrado aad u fudud oo aasaasi ah. Sidaa darteed, qorshe yar iyo hal -abuur kaa caawin kara iyo agrave; ku abuuraan aragtiyo iyo is -weydaarsiyo badan Tik Tok. Markaad raadinayso & agrave; ka dhig fiidiyowyadaada madadaalo, waxaa muhiim ah inaad ogaato dhagaystayaasha aad beegsanayso, maxaa yeelay ogaanshaha dhagaystayaashaada micnaheedu waa inaad beegsan karto waaxyo gaar ah.
Maqaal horeSida loo abuuro Trend Tik Tok Wanaagsan 2020
Maqaalka XigaShopping -ka IGTV ayaa hadda laga heli karaa barta Instagram